Keys | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Keys. Show all posts
ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira Keys (26.8.2015)
26.8.2015 အထိ ထွက်ထားတဲ့ ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira စတဲ့ Popular Antivirus တွေရဲ့ Keys တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော် Antivirus Keys တွေကို Update ဖြစ်အောင် တင်ပေး သွားပါ့မယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 3.2 MB ဖြစ်ပါတယ်။
Download Links တွေ အဆင်ပြေအောင် တင်ပေး ထားပါတယ်။
Original link - http://www.nayminnmaung.com/2015/08/eset-nod32-kaspersky-avast-drweb-avira.html
ကဏ္ဍ Activator, Antivirus, Keys, Security
ဝင်းဒိုး ၈.၈.၁ ကို အလွယ် တကူ Activate လုပ်ပေး နိုင်တဲ့ Windows 8/8.1 Activator (Official)
Windows 8/8.1 Activator (Official)
ဒီနေ့တော့ OS Device သမားတွေ အတွက် Windows 8.8.1 ဘယ် ဗားရှင်းကို မဆို အလွယ် တကူ Activate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Windows 8/8.1 Activator (Official) လေးကို တင်ပေး လိုက် ပါတယ်။
အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် သင့် ကွန်ပျူတာလေး Activate မဖြစ်သေးဖူး ဆိုရင်တော့ ဒီ KMS-Pico-8.9 Activator လေးက သင့်ကို လုံးဝ ကူညီပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ဆော့ဝဲ တွေက အသုံးပြု ရတာလည်း ရိုးရှင်း ပါတယ် အားလုံးလည်း လုပ်တတ် ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်
Activate လုပ်နည်း ကိုတော့ ပုံလေး တွေနဲ့ မရှင်းပြ တော့ပါ။
ဒီ Activator လေးကတော့ Windows 8/8.1/Windows 10 Technical Preview အထိ Activate လုပ်ပေး နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဒေါင်းလော့ ရလာတဲ့ Zip ဖိုင်ကို Extract file ဖြင့် ဖြေလိုက်ပါ။
၂။ ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ Antivirus program အားလုံးကို ခန ပိတ်ထားပါ။
၃။ Activator Setup ဖိုင်ကို Run as administer ဖြင့် အင်စတော လုပ်ပါ။
၄။ အားလုံးပြီးရင် ကွန်ပျူတာကို Reboot ချပေးလိုက်ပါ။
၅။ Reboot ကျပြီးလို့ ပြန်တက် လာတဲ့ အခါမှ တော့ သင့် ကွန်ပျူတာလေး အမြဲတမ်းသုံး အဖြစ် Activate လေးဖြစ် သွားပါပြီ။
တကယ်လို့ Activator ဆော့ဝဲကို ကွန်ပျူတာမှာ အင်စတော လုပ်မရဘူး Net Framework ဆောဝဲ တောင်းနေ ခဲ့ရင်တော့ ကွန်ပျူတာမှာ Net Framework ကို အင်စတော လုပ်နည်းများကို အောက်က လင့်မှာ ၀င်လေ့လာ ကြည့် လိုက် ပါ ဒေါင်းလော့ လင့်တွေလည်း ထည့်ပေး ထားပါတယ်။
Windows 8 နဲ့ Windows Server 2012 မှာ Net Framework 3.5 နဲ့ 4.0/5.0 အထက် Install မရခြင်း ပြသနာကို အလွယ် တကူ ဖြေရှင်းနည်း
Windows 8.8.1 Activator (Official) ကို အောက်က လင့်တွေမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
▼ solidfiles.com ▼ OR ▼ zippyshare.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, March 03, 20152comments:
ကဏ္ဍ Activator, Keys, Window
5 နှစ်စာ လိုင်စင်နဲ့ Avira Internet Security Suite 2015 + 2020 License
Avira Internet Security Suite 2015 အသစ် ထွက်လာလို့ ထပ်ပြီး တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။
ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးမှာ Antivirus ဆိုတာက မရှိ မဖြစ် ထည့်သွင်း ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Avria ကတော့ ကျွန်တော် သဘောကျတဲ့ Antivirus တွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးလို့ လည်းပြော
Trojan , Worms , Malware , Spyware , Autorun , စတာတွေ အပြင် အခြားသော Viurs အ
တော် များများကို သတ်ပေးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။ မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာ အတွင်းမှ Virus များကိုသာမ
က Network ချိတ်ဆက် ထားခဲ့ရင်လည်း Network ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Antivirus များကို လည်း
License အတွက် ကတော့ မပူပါနဲ့ 2020 အထိ 5နှစ်စာ လိုင်စင် ပါပြီးသားပါ။ စိတ်ကြိုက်အ
အသုံးပြုလိုသူများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
▼ Trial Version ▼ OR ▼ License Key (Sept-2020) ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, February 18, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Antivirus, Keys, Security
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ထုတ်ကုန်များ အတွက် အက်တစ်ဗယ်တာ
Microsoft Windows အပါအဝင် Microsoft Products အားလုံး အတွက် Universal Activator ဖြစ်
ပါတယ်။ ဒါလေး တစ်ခုဆောင် ထားရင် Microsoft ကထုတ်တဲ့ ဆော့ဝဲ မှန်သမျှ လိုင်စင်ရပါပြီ ... ။
Support ပေးနိုင်တဲ့ စာရင်း အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ... ။
RAR ဖိုင်ကို မဖြည်လိုက်ပါနဲ့.. ဖြည်တာနဲ့ Antivirus က ချက်ချင်း ဖျက်ပစ် ပါလိမ့်မယ် ... ။
ဒီအတိုင်း Run ပါ.. .
Net Frame ကတော့ 4.0 နဲ့ အထက် လိုအပ်ပါမယ် ... ။
Microsoft windows is the popular Operating in the world. It has more than 1000 Milion Users Around users in the world and Here at unicrack comes with another great release of Re-Loader. It is an Activator used to activate All Versions of Microsoft Windows and Office 2010, Office 2013, Office 2015 Beta for Free.
Download And Run Activator
Tick The Products That U Want
After finished restart your PC
After Restart Ur Selected Products Are Activated
လိုအပ်ပါက အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ link တွေမှာ မိမိ အဆင်ပြေမည့် link ၌ Down ယူပါ။
▼ solidfiles.com ▼ OR ▼ userscloud.com ▼ OR ▼ shared.com ▼
Window OS ပေါင်း ၉၀ ကျော်ကို Activate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ - ReLoader Activator 1.1 Final
ကဲဗျာ အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ All Window Activator လေး ကိုလည်း ဆောင်ထားကြ aစချင်ပါ
တယ်ဗျာ။ အများအားဖြင့်တော့ Service သမားတွေ ပိုပြီး လိုအပ် ပါလိမ့်မယ့်။ Window XP မှ
Window 8.1 အထိ Server 2008 , 2014 တို့ အပါဝင် Window OS ပေါင်း 90ကျော်ကို Activate
လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Activator တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Window OS များသာမက Microsoft Office 2010 , 2013 & 2015 အထိ အသုံးပြုနိုင်ဖို့
အတွက် Activate လုပ်ပေးနိုင် ပါသေးတယ်ဗျာ။ အခု Activator ကိုအသုံးပြုဖို့ အတွက်တော့
သင့်ရဲ့ စက်မှာ Net Framework 4.0. တော့ အနည်းဆုံး ရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Support လုပ်
ပေးနိုင်တဲ့ OS အမျိုးအစား တွေကို အောက်မှာရေးပြ ထားပါတယ်ဗျာ။
Reloader Activator 1.1 Final is an activator latest windows which you can use to enable all types of windows
To be able to use the Reloader Activator 1.1 Final You need .net framework 4.0.
▼ Download .net framework 4.0. ▼
File Name : ReLoader Activator 1.1 Final
Uploaded : Gigapurbalingga
OS Support : All Windows
▼ shared.com ▼ OR ▼ userscloud.com ▼
Rohos Logon Key 3.2 | 5.49 MB
Home Page: www.rohos.ru
▼ datafile ▼ OR ▼ tusfiles ▼ OR ▼ userscloud ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, December 03, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Keys, Password, Security
Ardamax Keylogger 4.3.1 Professional Edition | 1.97 MB
Ardamax Keylogger isakeystroke recorder that captures user’s activity and saves it to an encrypted log file. The log file can be viewed with the powerful Log Viewer. Use this tool to find out what is happening on your computer while you are away, maintainabackup of your typed data automatically or use it to monitor your kids. Also you can use it asamonitoring device for detecting unauthorised access. Logs can be automatically sent to your e-mail address, access to the keylogger is password protected. Besides, Ardamax Keylogger logs information about the Internet addresses the user has visited.
Security – allows you to protect program settings, Hidden Mode and Log file.
Application monitoring – keylogger will record the application that was in use that received the keystroke!
Time/Date tracking – it allows you to pinpoint the exact timeawindow receivedakeystroke!
Powerful Log Viewer – you can view and save the log asaHTML page or plain text with keylogger Log Viewer.
Home page : http://ardamax.com/keylogger/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, November 21, 2014 1 comment:
ကဏ္ဍ Hack, Keys, Locker
Kaspersky Internet Security 2013 + Keys
Kaspersky ချစ်သူများ အတွက် Internet Security 2013 အတွက် (Key Files)7ခုကို တင်ပေး လိုက်ပါ
တယ်။ Operating Systems တွေ ကိုလည်း ရေးထားပါတယ်။ မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ Kaspersky ကို လိုင်စင်
လုပ်ဖို့ အတွက် အောက်မှာ ဒေါင်းယူ လိုက်ပါဗျာ။
Kaspersky Internet Security has always provided protection for online transactions... and, in the latest version, whenever you attempt to log on to an online bank,apayment system website or an e-commerce site, our unique, new Safe Money feature will:
-Compare the website’s URL withadatabase of secure sites
-Check the certificate used to set up the secure connection – to avoid any behind-the-scenes transition from your intended site toa‘fake’ site
-Check your system for online banking vulnerabilities related to your PC’s operating system
-Automatically suggest opening the site in the Safe Money mode – for added security against the theft of personal and financial data
... so Kaspersky’s advanced technologies are always protecting you when you’re online – shopping, banking and more.
-Microsoft Windows Installer 3.0 or higher
-Microsoft Windows 8 (32/64 Bit)
-1 GB available RAM (32 Bit) or2GB available RAM (64 Bit)
From : Pyae Phyo (MMiTD) by oakkarmin thailand
ကဏ္ဍ Animation, Antivirus, Keys, Security
Kaspersky Pure [working keys] (15th Oct)
Security အတွက် Kaspersky Pure သုံးဆွဲ ကြတဲ့ ဘော်ဘော်တွေကို 2014 15th Oct ထွက်လေးဖြစ်တဲ့
Key တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကတော့ မိမိဝင်းဒိုး ဆိုင်ရာ 32bit or 64bit ကိုရွေးပြီး
ဖိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ Key ပေါ်မှာ double click နဲ့ RUN လိုက်ပါ။ ပြီးရင်း "OK" or "Yes" ပေါ်လာရင် နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ မိမိကွန်ပြူတာကို Restart ချလိုက်ပါ။ ပြန်တက်လာရင်တော့ Kaspersky က activated ဖြစ်
Internet for Myanmar From : by ရန်ကုန်သား
Kaspersky Internet Security 2014 [working keys] (15th Oct)
Security အတွက် Kaspersky သုံးဆွဲ ကြတဲ့ ဘော်ဘော်တွေကို 2014 15th Oct ထွက်လေး ဖြစ်တဲ့ Key တွေကို
တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ အသုံးပြု နည်းကတော့ မိမိ ၀င်းဒိုးဆိုင်ရာ 32bit or 64bit ကိုရွေးပြီး ဖိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ Key
ပေါ်မှာ double click နဲ့ RUN လိုက်ပါ။ ပြီးရင်း "OK" or "Yes" ပေါ်လာရင် နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ မိမိ ကွန်ပြူ တာကို Restart ချလိုက်ပါ။ ပြန်တက် လာရင်တော့ Kaspersky က activated ဖြစ်သွား
Internet for Myanmar by ရန်ကုန်သား
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, October 17, 2014 No comments:
ဝင်းဒိုး အက်တစ် မဖြစ်သေး သူများ အတွက် Windows Loader v2.2.2 Activa Full Version
Windows Loader ကို အားလုံး သိကြ မှာပါ... this copy of windows is not genuine ဆိုပြီး Screen နောက်ခံ အ
မည်းရောင် ကြီးနဲ့ Window Activate မဖြစ် သေး တာကို ဖြေ ရှင်း ပေး မဲ့ Software လေးပါ... ဒေါင်းယူ ၍ Run ပြီး
Install ကို နှိပ်ပေး ရုံပါပဲ..Windows Loader ကတော့ အခု ထွက်လာတဲ့ နောက်ဆုံး Update Version လေး ပါ...
လိုအပ်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
The application itself injectsaSLIC (System Licensed Internal Code) into your system before Windows boots; this is what fools Windows into thinking it's genuine.
- It will install just the certificate and serial for users with an existing SLIC.
From: အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by Win Hlaing
AVG Antivirus Universal Keygen Is Here !!!
AVG has over 187 million active users, as of March 31, 2014, using AVG´s products and services including Internet security, performance optimization, and personal privacy and identity protection.
AVG Offical setups (32\_64bit)
Download for AVG Anti-Virues Universal Keygen (32\_64bit)
datafilehost (Mirrors Link)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, August 09, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Antivirus, Internet, Keys, Security
XFENDER – where bitdefender meets infinity
Bitdefender released all new(as they say) version of their Anti Virus products. 2015. Howcome it doesn’t becomeachallange for piraters. But not anymore :) Here comes the complete solution for almost any recent bitdefender product making the license period valid forever. And When I say forever I mean it :)
This Crack works for (product comparison)
Bitdefender Antivirus Plus 2014 or 2015
Bitdefender Internet Security 2014 or 2015
Bitdefender Total Security 2014 or 2015
So the only two products that cannot be cracked are Bitdefender Sphere & Bitdefender Family Pack
License period keeps decreasing ?
Of course it will.but not below0days. Once your trial period shows ’0 days left’ it will be automatically reset-ed back to 90 days while you boot your computer :) simple theory
Trial resetting algorithms were originally found by nikko.Ported to the latest versions by On HAX
Virus total report : check here
Downloads (the crack works only for selected products,list given top)
Bitdefender 2015 Product Offline Setup Web Setup
32 bit - 64 bit
Bitdefender Antivirus Plus final Download (352 MB) Download (389 MB) Download (7 MB)
Bitdefender Internet Security final Download (418 MB) Download (455 MB) Download (7 MB)
Bitdefender Total Security final Download (422 MB) Download (459 MB) Download (7 MB)
Bitdefender Windows 8 Security Download(363 MB) Download(411 MB) Download (7 MB)
Bitdefender Antivirus Free Download (158 KB)
XFENDER.rar Download (842 KB) / Mirrors
Ooredoo Myanmar SIM Card တွင် အသုံးပြုရန် ဖုန်းနံပါတ်နှင့် Code များ
Ooredoo Myanmar SIM Card တွင် အသုံးပြုရန် ဖုန်း နံပါတ်များကို တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
★ - မိမိဖုန်းကို ငွေဖြည့် (Topup) လုပ်လို ပါက *123* # ကိုနှိပ်ပြီး Call ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
★ - အခြား Ooredoo ဖုန်း နံပါတ်သို့ ငွေဖြည့်ပေး လိုပါက *123*< မိမိငွေဖြည့် သွင်းပေး လိုသော ဖုန်းနံပါတ် > * # ကိုနှိပ်ပြီး Call ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
★ - ဖုန်း ငွေလက်ကျန် စစ်ဆေး လိုပါက *124# ကို နှိပ်ပြီး Call ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
★ - ၀န်ဆောင်မှု များကို စီမံရန် *133# ကိုနှိပ်ပြီး Call ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
★ - မိမိ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို စစ်ဆေးရန် *133*5# ကိုနှိပ်ပြီး Call ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
★ - ဖုန်း ငွေလွှဲပြောင်း ပေးလို ပါက *155*< လွှဲပြောင်း လိုသော ပမာဏ > *< လက်ခံမည့် သူ၏ ဖုန်းနံပါတ် ># ကိုနှိပ်ပြီး Call
★ - အခြားသူအား မိမိဖုန်းကို ငွေဖြည့်ပေး စေလိုပါက Top Me Up Function ကို အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ *126*< ဖုန်း ငွေဖြည့် ပေး မည့် သူ၏ ဖုန်းနံပါတ် >*< ဖုန်း ငွေဖြည့် လိုသော ပမာဏ ># ကိုနှိပ်ပြီး
★ - ဖုန်း ပြန်ခေါ်စေ လိုပါက Call Me Back Function ကို အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ *122*< ပြန်ခေါ်စေ လိုသော ဖုန်းနံပါတ် >#
ကိုနှိပ် ပြီး Call ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ကြပါစေ။
From: Myanmar Mobile App Store by: သက်နိုင်စိုး
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, July 26, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Keys, Phone Application
KMSAuto Net 2014 v1.2.6 Portable
အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ Window & Office Activator လေးကိုတော့ ကျွန်တော် တော်တော် လေး
သဘောကျတဲ့ Activator ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက Microsoft ကထုတ်တဲ့ Window တွေ
ကို Activate လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Window XP နဲ့ Server 2008 ကအစ နောက်ဆုံး Window 7,8 နဲ့ Server 2008, 2008 R2, 2012,
2012 R2 VL and Retail Also for Office 2010, 2013 အထိ အားလုံးကို Activate လုပ် ပေးနိုင်ပါ
Microsoft Office 2010,2013 Activator စတာတွေ ကိုလည်း Activate လုပ်ပေးနိုင် ပါသေးတယ်ဗျာ။
အခု Activator ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် NET Framework 4.0 or 4.5 တော့ အနည်းဆုံးရှိထားရပါမယ်
ဗျာ။ Version1.2.6 နဲ့တော့ မရပါဘူးနော်။ Window နဲ့ MS Office တွေကို Activate ဖြစ်အောင် ပြု
လုပ်ပေးမဲ့ KMSAuto Activator လေးပါ... Activate မဖြစ် သေးတဲ့ Window & MS Office တွေအ
တွက် နောက်ဆုံး Update Version ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။အသေးစိတ်လေ့လာချင် တယ်ဆိုရင်
Windows Vista, 7, 8, 8.1, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 VL and Retail Also for
Office 2010, 2013 VL editions.
Single Language Windows 8.1,
Windows 8.1 Core,
Core N Windows 8.1,
Windows 8.1 Pro WMC,
Windows Embedded Industry Pro 8.1,
Windows Server 2012 Standard R2,
. Windows Server 2012 R2 Datacenter
-Fixed bug When working with command line parameters creatingascheduled task.
Pyae Phyo (MMiTD) by Win Hlaing
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, May 01, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Activator, Keys
IObit Protected Folder 1.2 Serial Keys are Here !
Protected Folder isafolder / file locker which protects user’s privacy and important data from theft, loss or leaks. To lock folder and file, just drag and drop them into Protected Folder’s safety box and you can hide and protect them from being viewed or modified. Protected Folder is an ideal folder locker if you are concerned with the security of you private or important data.
Install latest trial version of IObit Protected Folder
Open IObit Protected Folder and TURN OFF YOUR INTERNET CONNECTION
Copy one of the keys given below and activate IObit Protected Folder
It will givealicense validation error,just ignore it and press okay
Close IObit Protected Folder and Turn on your internet connection (if you want)
Open IObit Protected Folder again enjoy lifetime pro license :)
IObit Protected Folder latest trial setup
Danisoftwares Registered softwares free download latest version by Fun Mujja
ကဏ္ဍ Keys, Security
Sony Products Multikeygen v2.5 Keygen and Patch Only
Sony Products Keygen and Patch များကို ရှာပေးပြီး Full ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့စ်ဝဲ ဖြစ်
အောက်မှာ သူလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့စ်ဝဲ အမျိုးအစားတွေကို ရေးထားပါ။
လိုအပ်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းပြီး သိမ်းထား လိုက်ပါ။
(for example C:Program FilesSonyVegas Pro 8.0) Then select the Shared Plugins folder if needed. Now you can run the app that you are going to register. Press Generate button for Serial Number and Authentication Code. (These codes are work in pair!) After you passed the serial number form, select activation from Another Computer...
If you click Patch button and then Cancel button, the selected app will be unregistered.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, April 22, 20142comments: